जो काम गर्छ उसैले जित्नु पर्छ, जिताउनु पर्छ | www.sidhakurausa.com
जो काम गर्छ उसैले जित्नु पर्छ, जिताउनु पर्छ
“जो काम गर्छ उसैले जित्नु पर्छ” सबै मिलेर उनीहरुलाई जिताउनु पर्छ, फेरी काम गर्ने मौका दिनु पर्छ, काम गरेनन भने अर्को चुनावमा कसैले हराउनु पर्दैन, उनीहरु आफै हार्छन, उनीहरुको योगदानले उनीहरुलाई हराउँछ । मान्छेको सबै भन्दा ठुलो बिपक्षी उसैको बुद्दि, बिबेक, बानी बेहोरा र उसले सिकेको कुरा हो । मान्छेको असक्षमता सबै भन्दा ठुलो उसको सत्रु हो ।
गैर आबासीय नेपाली संघ अन्तरास्ट्रिय समन्वय परिषदको यहि अक्टोबर १४ देखि १७ सम्म काठमान्डूको हायात रिजेन्सी होटलमा आयोजना हुन गैरहेको अन्तरास्ट्रिय सम्मेलन र चुनावमा, काम गरेर देखाएका उम्मेदवारहरुको पुन: गुञ्जायस हुनुपर्ने कुरामा कसैको दुइमत नहोला ।
अध्यक्षको प्रतिस्पर्धीहरुमा घले दम्पत्तिकै नियमितताको चर्चा चलिरहेकै छ भने शक्तिशाली महासचिब पदमा बद्रि केसीले निरन्तरता पाउनु पर्ने कुरामा कसैमा शंका नरहला । एउटा ठुलो जमात घले दम्पत्तिकै निरन्तरताको कुरामा अडिग छन, उनीहरुले काम गरेर देखाएको प्रमाण छ, यसले जमुना घलेको उत्पत्ति गराउने बलियो तर्क गरिदैछ ।
बद्रि केसीले निरन्तरताको कुरा उठान गर्ना साथ् अघोषित रुपमा नाउ आएका एनसीसी अध्यक्ष डाक्टर केशब पौडेल छेउ लागिसकेका छन । अर्को गतिलो उम्मेदवार त् के केसीले निर्बिरोध हात लाउने स्थिति तयार भैसकेको छ । क्षेत्रीय उपाध्यक्षहरुको बाढी आएको छ, बाढीकै बिचमा कुमार पन्त लगायतको निरन्तरता हुनुपर्ने कुरामा पनि अधिकांश सहमत छन ।
क्यानाडा, उत्तर अमेरिका, मेक्सिको लगायत दक्षिण अमेरिकाका मुलुकहरुमा बसोबास गर्ने एनआरएनहरुको प्रतिनिधि चयनमा भने बिगतको योगदान, बर्तमानको सक्रियता र भबिस्यको भरपर्दा योजना भएका उम्मेदवारहरुको चयन हुनुपर्ने तर्फ अधिकाम्स एनआरएनहरु सहमत होलान ।
परिषद्को निर्बाचनका लागि मनोमानी ढंगले चयन गरिएका १ सय ८१ अमेरिकी डेलिगेटहरुको आगमन काठमान्डूमा हुने क्रम निरन्तर छ । यो बिचमा रमिता हेर्न जाने हुल पनि बाक्लै छ भने उम्मेदवार बन्ने चाहना राख्ने पनि निकै छन । आकांक्षा बढ्दो छ, सिट सिमित छ । गतिला उम्मेदवार, कामले चिनिएका र खारिएका कम, छोटो समयमा ठुलो नाक बनाउने चाहना भएका उम्मेदवारको हुल भने ठुलो छ ।
अमेरिकाज क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पदमा बर्तमान क्षेत्रीय संयोजक सोनाम लामा र पूर्ब एनसीसी अध्यक्ष खगेन्द्र जिसीको चर्को प्रतिस्पर्धा छ, यसमा दुबैको प्रतिष्ठाको लडाई छ ।
निरन्तर काम, लामो अनुभव, ठुलो योगदान जस्ता महत्वपूर्ण सबाल हेर्यो भने उपाध्यक्ष पदमा सोनाम लामाको बिकल्प छैन । उनको दशकौंदेखिको योगदानको कदर गर्ने बेला यहि हो एनआरएनहरुले । परिषद्को बिधान कार्यान्वयनमा उनका प्रतिबद्दताहरु अरु कसैले नाप्न सक्दैनन् । नेपालमा पर्दा उनले पुर्याएको जत्रो योगदान अर्को उम्मेदवारले कदापि देखाउन सक्दैन, पढेर ठुलो भएको र धनको प्रतिस्पर्धा गर्ने अर्को उम्मेदवार भन्दा लामा कम पनि छैनन् भने गरेर देखाउन सक्ने क्षमता पनि लामाको भन्दा अर्कोको छैन । सीधाकुराले १२ बर्षदेखि अमेरिकाको नेपाली समाजको अध्ययन गर्दै आएको छ र यहि बिचमा लामाको योगदानलाई अर्को उम्मेदवारले परास्त गर्न नसक्ने स्थिति तयार भैसकेको छ ।
उपाध्यक्ष पछिको अर्को शक्तिशाली पद भनेको क्षेत्रीय संयोजक हो, यो पदमा एसी शेर्पा सबभन्दा बलिया देखिन्छन, श्री पराजुली यहि पदका लागि मैदानमा देखिएका छन भने भित्र भित्रै कुरो मात्र आएको तर पर्दा पछाडी नै रहेका गौरी जोशीलाई समेत कतिले उठ्ने बताइरहेका छन तर उनको केहि जानकारी पाइएको छैन । कामले गर्दा शेर्पाको उम्मेद्वारी सदर हुने संकेत स्पस्ट छ ।
क्षेत्रीय उपसंयोजक पदमा नबिन शेरचन अगाडी छन, उनलाई तेम्बा शेर्पाले पच्छ्याईरहेका छन । शंकर खड्का, दिल श्रेष्ठ आदिका गणना क्रमश हुँदै जानेछ ।
सह कोषाध्यक्ष पदमा राम चन्द्र खरेलको उम्मेद्वारी छ । लामा र शेर्पा, शेरचन र खरेलको उमेद्वारी सदर हुने धेरैको अनुमान छ ।
मुख्यकुरा घोषणा पत्र नै हो, मतदाताले यहि हेर्ने र मत जाहेर गर्ने हुँदा लामा र शेर्पाले यो सार्बजनिक गरिसकेका छन ।
दोश्रो कुरा मत कसलाई खस्छ र खस्दैन भन्ने कुरा अमेरिकादेखि उडायर कसले लैजान्छ? कसले होटलको ब्यबस्था मिलाउछ? कसले दारु, मासु र भातको ब्यबस्था गर्छ? मत त्यतै झर्छ भन्ने कुरामा सबैको मतैक्यता छ ।
उपाध्यक्ष पदका प्रत्यासी सोनाम लामाका प्रतिबद्दताहरु:
घोषणा पत्र ।।
मेरा अग्रज आदरणीय आईसीसी अध्यक्षज्यु सल्लाहकार ज्युहरु, पदाधिकारी ज्युहरु आइसिसी सदस्यज्युहरु लगायत सम्पुर्ण नव निर्वाचित पधादिकारीज्युमा म सोनाम लामाको ।
आजको यो सभामा म यहाँहरुलाई साक्षी राख्दै मेरो एनआरएनएको ८ वर्षको यात्रालाइ निरन्तर जारी राख्न आगामी २०१७/ २०१९ को आइसिसिको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी लिने घोषणा गर्दछु । यहाँहरुको विश्वास र मायाले मलाई अझ निरन्तर काम गर्न उर्जा मिलेको हो । गोर्खालीहरुको ईमान्दारीता र बहादुरीले संचित यो बेलायत मेरो अर्को घर हो, तपाइहरु मेरा परिवार । म सम्पुर्ण एनआरएनहरुलाइ विश्वास दिलाउन चाहन्छु मेरो उपाध्यक्षको कार्यकालमा गर्नु पर्ने मेरा प्रतिबद्धताहरु
१) मेरो कर्म क्षेत्र अमेरीकाको क्षेत्रिय सम्मेलनमा पारीत भिजन २०२० एण्ड वियोण्डलाई सफलतापुर्वक लागु गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु। २)हामी एनआरएनहरुको दोश्रो गाउँ लाप्राक मेरो पनि सपना हो । मैले पनि सेवा गर्ने मौका पाएको छु । आदरणीय अध्यक्षज्युसगै अब बाँकी काम पुरा मेरो पनि साथ सहयोग र पूर्ण प्रतिनाद्धित छु।
३) गैर आवासीय नेपालीहरुको १४ वर्ष देखिको ठुलो सपना हाम्रो आफ्नो भवन जसको म आफै संयोजक छु । अब बाँकी काम पनि पुरा गर्न म आगामी दिनमा निरन्तरता दिदै पुरा गर्ने पर्तिबद्धता गर्न चाहन्छु।
४) हामी भोली मरेर जान्छौ, हामी मरेर गएपनि हाम्रा छोराछोरी, नातीनातीनाहरुलाइ मुलुकसंग जोडी राख्न नागरिकताको निरन्तरताको लागी हिजोको भन्दा धेरै सकृय हुनेछु ।
५) देशमा काम गर्ने दक्ष कामदार छैन । मैले आफैले लाप्राक, हेडक्वाटर, मेरो बनिरहेको होटल, मुक्तिनाथ रिर्सोट, विश्वको अग्लो स्थानमा बनिरहेको बुद्ध मुर्ती परियोजनामा मैले आफै भोगेको छु । त्यसैले मुलुकमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने अभियानमा मेरो सकृयता रहने छ ।
हिजो जसरी देशमा परेको संकटमा अध्यक्षज्यु संग काँधका काँध मिलाएर चाहे भुकम्प पिडितलाई राहत पु–याउन होस् , चाहे सप्तरी बाढी पिडितलाई सघाउन म हिजो जतिकै भोली पनि खट्ने छु । हिजोको दिनमा जति गरे म त्यसलाई निरन्तरता दिदै मेरो अबको दुई वर्षको कार्यकालमा यति काम सम्पन्न गर्न सके भने मैले मेरो देश मेरो नेपाल र तपाई एनआरएनहरु प्रतिको कर्तव्य पुरा भएको विश्वास गर्ने छु ।
क्षेत्रीय संयोजक पदका उम्मेदवार एसी शेर्पाका प्रतिबद्दताहरु:
अमेरिकाज क्षेत्रीय संयोजक उमेद्वार म एसी शेर्पाका प्रतिबद्धताहरु:
गैर आवासिय नेपाली संघको अमेरिकाज क्षेत्रको क्षेत्रिय संयोजक (RC) पदका लागि वर्तमान क्षेत्रीय उपसंयोजक (DRC) म एसी शेर्पाले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा सँगै निम्न प्रतिबद्धताहरु गरेको छु:
१, अमेरिक तथा यस क्षेत्रमा बसोबास गरेका गैर आवासीय नेपालीहरु बिच एकतालाई अझै बलियो बनाउने
२, अमेरिकामा बसोबास गरेको नेपालीहरुलाई आइ परेको समस्यहरुका बारेमा अमेरिकी सरकारसंग छलफल गर्ने तथा समस्यहरुमा आवश्यक सहयोग पुरयाउने
३, नेपालमा अमेरिकन कम्पनीहरूलाई लगानीको लागि सल्लाह सुझाब दिने, लगानीको लागि हातेमालो गर्ने
४,नेपालको पर्यटन विकासको लागि नेपाल सरकारसंग सल्लाह, सुझाब लिएर पर्यटनको विकासमा योगदान गर्ने
५, एनआरएनए भिजन २०२० एण्ड बियोण्ड र चालु परियोजनाहरुलाई सफल रुपमा कार्यान्वयन गराउन अमेरिकाज क्षेत्रबाट आवश्यक योगदान गर्ने
६,संसारकै सबै भन्दा बढि सदस्य संख्या रहेको अमेरिका जहाँ हालसम्म २६ वटा राज्य च्यापटरहरुको स्थापना भईसकेको अवस्थामा पंजीकृत सदस्यताको आधारमा क्षेत्रीय उपसंयोजकको ब्यवस्था गर्नु आवश्यक पहल गर्ने अन्यथा अमेरिकालाई ४ वटा छुट्टा-छुट्टै एनसीसी बनाउन जोड गर्ने
७, अन्र्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद, राष्ट्रिय समन्वय परिषद र मातहतका बिभागसँग परस्पर छलफल गरी संयुक्त रुपमा भावी कार्ययोजनाको तर्जुमा गर्ने
८, राष्ट्रिय समन्वय परिषदको कार्य योजना तय गराई नियमित रुपमा अनुगमन र मुल्यांकन गरी प्रत्येक महिनाको प्रगती विवरण केन्द्रमा अपडेट गर्ने
९, अमेरिकाज क्षेत्रका हाल अमेरिका, क्यानाडा,चिली र ब्राजिलमा एनसीसी स्थापना भईसकेको अवस्थामा दक्षिण र उत्तर अमेरिकाका र युएस टेरिटोरीमा एनसीसी स्थापनार्थ आवश्यक पहल गर्ने
१०, सम्पूर्ण एनसीसीहरुलाई आईसीसीको वेवपोर्टल अनुसार सदस्य बन्ने र बनाउने संयोजन गरी आईसीसीका सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गर्न क्षेत्रका सबै एनसीसीहरुलाई प्रेरित गर्ने। साथै हरेक ६/६ महिनामा चेकलिस्ट बनाएर आवश्यक अनुगमन गर्ने
११, अमेरिकाज क्षेत्रलाई विश्वको सर्वोत्कृष्ट एनसीसी बनाउनको लागि तन, मन र धन लगायत हर क्षेत्रबाट लागि पर्ने